Izeluleko Ezine Zokulapha Ukuqunjelwa Ezinganeni | Bezzia
Amathiphu amane Okwelapha Ukuqunjelwa Ezinganeni
UMaria Jose Roldan | 09/04/2021 22:00 | Eyendodana yakho
Ukuqunjelwa yinkinga yokugaya ukudla ejwayelekile ezinganeni. Khumbula ukuthi amathumbu akho asakhula ngakho-ke kuyinto ejwayelekile ukuthi ngezikhathi ezithile iveza inkinga yokuthi ayiqedi ukumunca izakhi zomzimba ezahlukahlukene ekudleni kahle. Into ejwayelekile ukuthi lokhu kuqunjelwa kungaxazululwa ngaphandle kwezinkinga eziningi bese kunyamalala njengoba kufike.
Kodwa-ke, uma ukuqunjelwa kuqhubeka ngokuhamba kwesikhathi, kubalulekile ukuthi ubonane nodokotela azokuhlola ukuthi ngabe unanoma yiluphi uhlobo lwe-pathology. Ngemuva kwalokho siphakamisa uchungechunge lwamakhambi noma amathiphu angasiza omncane ukuxazulula inkinga yakhe yokugaya ukudla.
1 Khulisa ukudla kwakho kwe-fiber
2 Phuza amanzi amaningi
3 Dlala ezemidlalo
4 Ukungeniswa kwemikhiqizo yobisi ebilisiwe
Khulisa ukudla kwakho kwe-fiber
I-Fiber ibalulekile futhi ibalulekile uma kukhulunywa ngokuvimbela ingane ekuhlushweni ukuqunjelwa. I-fiber ayikwazi ukuntuleka ekudleni kwengane futhi kufanele ithathwe njalo ngakho konke ukudla. Itholakala ezithelweni ezifana ne-apula noma i-kiwi, imifino noma okusanhlamvu. Imvamisa, ukuba nokudla okucebile nge-fiber kusiza izinkinga ezehlukene zokuqunjelwa zinyamalale.
Enye into esemqoka ekuvimbeleni ingane ukuthi ingahlushwa ukuqunjelwa ukuphuza amanzi usuku lonke. Kubaluleke kakhulu ukuthi ingane ihlale ine-hydrated ngokuphelele ngaso sonke isikhathi futhi ungavezi ukuntuleka koketshezi. Ukufakwa kwamanzi kusiza indle ukuthamba futhi kungaphumela ngaphandle ngaphandle kwenkinga. Isiphuzo esinconywayo kufanele kube ngamanzi, ukuphuza iziphuzo ezinoshukela noma amajusi akunconywa ngoba akunikeli ngalutho oluhle emzimbeni.
Ukuvivinya umzimba njalo kuvimbela ukuqunjelwa. Ukuzivocavoca umzimba kusiza isisu sendle ukwehla kuwo wonke amathumbu ngaphandle kwenkinga nokuxosha indle ngendlela egculisayo. Ngaphezu kwalokho, ukuzijwayeza ezemidlalo kubalulekile enganeni ukuthi izizwe kahle ngayo futhi igweme izinkinga zamakhilogremu athe xaxa.
Ukungeniswa kwemikhiqizo yobisi ebilisiwe
Enye yezimbangela zokuqunjelwa ezinganeni kungenzeka ngenxa yokuntuleka kwama-probiotic ngaphakathi kohlelo lokugaya ukudla. Lawa mabhaktheriya akhona ekudleni okuvutshiwe futhi asiza ekutholeni izakhamzimba ezahlukahlukene ezitholakala ngaphakathi kwendlela yokugaya ukudla.
Sekukonke Ukuqunjelwa ezinganeni kuxazululwa ngokulandela lolu chungechunge lwamathiphu noma amakhambi emvelo. Kodwa-ke, kungenzeka ukuthi inkinga iqhubeka naphezu kokulandela izeluleko ezinjalo. Uma lokhu kwenzeka, abazali kufanele baye kudokotela ukuthola ukuthi kungani ukuqunjelwa kuqhubeka noma kuqhubeka futhi kusuka lapho, benze ngendlela efanelekile. Ezimweni ezinjalo, ingane ingahlushwa uhlobo oluthile lokugula olumvimbela ekutholeni amathumbu ejwayelekile. Le nkinga yokugaya ukudla ivame ukuxazululwa ngokufaka imishanguzo ethile esiza inqubo yokugaya ukudla ukuba ibe yinhle. Ngaphandle kwalokho, omncane angaba neziqephu zokuqunjelwa ngokuqhubekayo ngakho konke okubi okubandakanya ezingeni lezempilo.
Indlela ephelele ye-athikili: Bezzia » UMadres » Eyendodana yakho » Amathiphu amane Okwelapha Ukuqunjelwa Ezinganeni
Sixoxa neZero Waste, isitolo sakho esiku-inthanethi ngempilo esimeme
Izitshalo ezi-5 ezinde zasendlini zokuhlobisa amakhona omuzi wakho